के भविष्यमा यसैगरी चल्नेछन् अफिस ? – The Public Today
के भविष्यमा यसैगरी चल्नेछन् अफिस ?
विजय कुमार सिंह भदौ २६, २०७७ ८:२८ am
भदौ २६ गते । कोभिड–१९ पछिको भविष्यबारे कम्पनीहरु यतिखेर निकै गम्भीरतापूर्वक सोचिरहेका छन् । यसमा केही महिनादेखि घरबाट काम गरिरहेका कर्मचारीहरुलाई अफिसमा सुरक्षित वातावरण प्रदान गर्ने सम्बन्धी विभिन्न किसिमका मोडलहरु प्रस्तुत गरिएको छ ।
गत मे मा गरिएको एक सर्वेक्षणमा ५५ प्रतिशत अफिसका कर्मचारीहरुले आगामी दिनहरुमा काम गर्दा अफिस र घर दुवैको मिश्रणयुक्त वातावरणमा काम गर्न चाहेको बताएका हुन् । र अहिले विभिन्न देशमा कम्पनीहरुले आ–आफ्नो तरिकामा कामदारहरु व्यवस्थित गरिरहेका छन् जसमा ठुल्ठुला कम्पनी समेतले २०२१ सम्म घरबाटै काम गर्दा उपयुक्त हुने बताएका छन् ।
अझै पनि कर्मचारीलाई अफिसबाटै काम गर्न लगाउनेहरुले चाहिँ सबैलाई समुहमा विभाजित गरि पालैपालो बोलाउने गरिरहेका छन् । कुनैकुनै कम्पनीहरुले घरबाट काम गर्ने कि अफिसबाट भन्ने निर्णय कर्मचारीमाथि नै छाडिदिएका पनि छन् । तर दिर्गकालीन रुपमा सोच्दा शारीरिक उपस्थिति, काम गर्ने समय अनि सहकर्मीबीच अन्र्तक्रियाको विकल्प खोज्नैपर्ने धेरैले महसुस गरिरहेका छन् ।
सिंगापूरस्थित बिजनेस स्कुल ‘इन्सटेड’ का व्यवस्थापक डिजाइन अनुसन्धानकर्ता, मार्को मिनर्भिनीका अनुसार अहिलेको अनिश्चितता हेर्दै अफिस र घर दुवैको माहोल मिलाएर विभिन्न किसिमका ‘हाइब्रिड मोडल’ को तयारी भइरहेको छ । हाइब्रिड भनेको कामलाई लचिलो बनाउने शैली हो र यसका लागि विभिन्न प्रणालीमा बदलाव ल्याउनुपर्ने हुन्छ ।
हाइब्रिड काम गर्ने शैलीले कर्मचारीहरुलाई कहाँ काम गर्ने र कतिखेर काम गर्ने भन्ने सम्बन्धी धेरै स्वतन्त्रता दिनेछ र आफ्नै इच्छा अनुसार आराम गर्ने अवसर पनि दिलाउँछ । यसमा अरुबेला अफिसमा जसरी सिमित समय भित्रै काम सिध्याउनुपर्ने दबाब हुनेछैन । यसरी हेर्दा संरचनात्मक अनि सामाजिक दुवै हिसाबले यो तरिका एकातर्फ स्वतन्त्र र अर्कोतर्फ लचिलो लाग्छ । र कोभिड महामारी सुरु भएदेखि धेरै कम्पनीले हाइब्रिड शैली अपनाइ पनि रहेका छन् ।
जसमा एउटा निर्धारित दिन अफिस भित्र बैठक बसिन्छ भने अरु दिन व्यक्तिगत ध्यान दिनुपर्ने किसिमका काम कर्मचारीलाई घरमा वा अन्य कुनै ठाउँमा एक्लै बसेर गर्न भनिन्छ । ओरिएन्टेसनलगायत केही परियोजनामा मात्र कर्मचारीको अफिस उपस्थिति अनिवार्य गर्ने गरिएको छ । विशेषगरी घरमा काम गरेका बेलामा भिडियो सेसनलाई कम गर्ने प्रयास गर्न सकिने द स्मार्ट इन्भेस्टक कम्पनीका प्रमुख ब्राउस सिल्भरमन बतााउँछन् ।
ब्राउसका अनुसार त्यसो गर्नुले अफिसमा दिनभर लाग्ने काम घरमा एकाग्र भएर गर्दा केही घण्टामै सक्काउन सकिनेछ । तर यसका लागि कर्मचारीको ध्यान भङ्ग नगर्ने सम्बन्धी ख्याल राख्नुपर्छ । त्यस्तै अन्य दिनहरुमा चाहिँ कर्मचारीलाई पालैपालो थोरै थोरै सङ्ख्यामा हप्ताको केही दिन अफिस बोलाउन सकिने उनले बताए ।
अमेरिका र भारतमा धेरै कम्पनीहरुले केही महिना अघिदेखि नै मिश्रित काम गर्ने शैली अपनाइसकेका छन् ।
यसमा तीन हप्ता जहाँसुकैबाट काम गर्ने छुट हुन्छ र केबल एक हप्ता मात्र अफिसमा बसेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ । घरबाहेक बाहिर अन्य स्थलमा एकान्तपूर्वक काम गर्दाको सबै खर्च अफिसले नै उठाउने गर्दछ र आराम गर्न घरै फर्किन प्रोत्साहन गरिन्छ । सिकागोस्थित बारलो ल फर्मले चाहिँ महामारी भरि पनि कामलाई घरमा आधारित बनाउन नसकेको वकिल मारिया बारल बताउँछिन् ।
किनकि अफिसका हजारौँ पाना डक्युमेन्ट र फाइलहरु घरमा प्रिन्ट गर्न नसकिने उनको भनाइ छ । यसरी अधिकांश जरुरी उपकरण र साधनहरु अफिसमै हुने भएकाले केही सङ्ख्यामा कर्मचारीहरु नियमित अफिस गइरहेको उनले बताइन् । यस प्रकारले कतिपय काम घरबाट गर्न सम्भव नभएको हुँदा अफिस उपस्थितिको परम्परालाई सजिलै कम गर्न सकिनेछैन ।
तर पनि आगामी दिनमा यस सम्बन्धी ठुल्ठुला परिवर्तन देख्न सकिने विज्ञहरु बताउँछन् । जस्तै थोरै सङ्ख्यामा कर्मचारीलाई अफिस बोलाउने कम्पनीहरु ठूलो ठाउँबाट सानोमा सर्न सक्छन् । कोभिड–१९ अगाडि सर्च इन्जिन एजेन्सी नोभोसले ठूलो क्षेत्रफल भएको अफिस लिजमा लिन हस्ताक्षर गरेको थियो तर महामारीपछि यसले सो लिज रद्द गराएको हो ।
कम्पनीका सिइओ एनटोनियो विड्रल भन्छन्, “कर्मचारीहरुले अधिकांश समय घरबाटै काम गर्न सक्छन् भने हामीले किन नयाँ ठाउँ खोजेर अनावश्यक मासिक भाँडा तिरिरहने ?”
यसबारे स्ट्यानफोर्ड युनिभर्सिटीमा अर्थशास्त्रका प्रोफेसर एवम् ‘रिमोट वर्क’ का विज्ञ निकोलस ब्लुमले भनेका छन्, “महामारीको प्रभाव कम हुँदै गएपनि अब धेरै अफिसले कम्तीमा दुईदिन घरबाटै काम गर्ने विकल्प दिनेछन् जसले एकाग्रता र सामुहिक सहकारिताबीच सन्तुलन राख्नेछ । र सामाजिक दुरी कायम राख्ने व्यवस्थासहित कम्पनीहरु अनावश्यक कोठा भएका अग्ला भवनबाट अन्तै सर्नतर्फ लाग्नेछन् ।”
तर हाइब्रिड काम गर्ने शैलीका केही नकारात्मक पक्ष पनि छन् । यसमा सामाजिक आर्थिक असमानताका कारण घरबाट काम गर्न असक्षमहरु पनि धेरै छन् । यसमा गुणस्तरीय इन्टरनेटको पहुँचदेखि छोराछोरीको ख्याल राख्नुपर्ने बाध्यता र घरबाट काम गर्न सहज अनि एकान्तपूर्ण वातावरणको सुविधा सबैसँग हुँदैन ।
कतिपय मानिसहरु अधिक भीडभाडयुक्त फ्ल्याटमा बसेका हुन सक्छन् जसका लागि घरबाट काम गर्नु धेरै हिसाबमा अनुपयुक्त हुनेछ ।
त्यस्तै कर्मचारीहरुलाई विभिन्न समुहमा विभाजित गर्दा त्यसले सहकर्मीहरुबीच अन्तरक्रियाको कमी गराउनेछ भने घरबाट मात्र काम गर्ने र अफिस आउनेहरुबीच विभाजन सिर्जना हुने सम्भावना पनि हुन्छ । यसले अफिसको सहकारितामा अवरोध पुर्याउन सक्नेछ । बीबीसी